Ekwentị mkpanaaka ya na kamera 192 MP na Snapdragon 765G na-ekwupụta ọkwa | Gam akporosis
Ka oge na-aga, mmasị ndị na-emepụta ama nwere ịtinye modulu igwefoto megapixel dị elu na ụdị ha ga-apụtawanye ìhè.
Ka ọ dị ugbu a, ihe mmetụta igwefoto kachasị elu bụ 108 MP, nke sitere na Samsung. Otú ọ dị, akara ahụ agaghị anọ ebe ahụ, dị ka akụkụ nke mmalite nkà na ụzụ. N'oge na-adịghị anya, anyị ga-enweta ihe mmetụta ọhụụ site na South Korea, nke ga-abụ 150 MP, dịka ụfọdụ si kwuo. O sina dị, otu onye mmechi 192 MP Ọ ga-ezuru ocheeze dị ka mkpebi kachasị elu ma ga-abịarute afọ a na ekwentị nwere Qualcomm Snapdragon 765G mobile platform, na-eju mmadụ niile anya.
Ọnụ ụzọ Ebe Nlele Dijitalụ abụwo onye kwuru okwu maka nke mbụ ya Omimi nke dị omimi na igwefoto MPP 192 na Qualcomm Snapdragon 765G processor. N'oge ahụ, naanị njirimara abụọ na nkọwapụta teknụzụ nke agbapụtara ma kpọọ ya na akụkọ nke saịtị ahụ bụ ndị a, mana ekwuru na ọnwa na-abịa anyị ga-enweta ozi ndị ọzọ gbasara akụrụngwa nke ngwaọrụ a, nke ka dị ị maghịdị ụdị ọ bụ.
Anyị maara na ISP chipset dị ike zuru oke iji kwado igwefoto 192MP n'onwe ya, yabụ na ọ chọghị mpempe mpụga. Ihe data a na - eme ka ozi a dị ike ma na - agbanwe agbanwe, mana nke bụ eziokwu bụ na, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọ bụla (ọkwa, nkwupụta ma ọ bụ nkwupụta), ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na anyị ga-anata ọnụ na nso nso igwefoto a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 200 megapixels, jụọ ajụjụ taa nwere ike ịhapụ ihe karịrị otu obi abụọ.
Site na teknụzụ 9-in-1, foto ndabara site na igwefoto 192 MP ga-abụ 21 MP; nke a bụ ihe na-anọgide na-hụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ekwentị ga-eji igwefoto MPI 192 na Snapdragon 765G mara ọkwa
Ekwenyere Vivo Y50: Ekwentị 6,53 "Ekwentị Quad nwere igwefoto Quad